Kuguma Kwekusika, naTim Willocks. Ongorora | Zvazvino Zvinyorwa
Kuguma Kwekusika, naTim Willocks. Ongorora
Tim willocks (Stalybridge, 1957) ari chiremba wepfungwa y munyori Britain, ine zvinyorwa zvitanhatu zvakaburitswa, inobata chero mhando - inoti hapana, pane nyaya dzakanaka chete - uye mazita ayo anozivikanwa Kuguma kwekusika (mhosva yekuparwa kwemhosva) y Kurongeka (nhoroondo yenhoroondo). Ndiye mumwe wevanyori vangu vanonamatwa zvakanyanya, pamwe kune izvo zvisina kukodzera kuzivikanwa asi zvinoshamisa Chii. Izvi zvangu ongorora yenhoroondo yakaoma senge ine simba, haina kukodzera matumbu akaomarara.
1 Kuguma Kwekusika, naTim Willocks (1994)
Magumo pekupedzisira yekusikanaTim Willocks (1994)
Green River ndiro zita rejeri reTexas iro riri iro iro gehena panyika. Inotungamirwa nemukuru wejeri John anozvivaraidza, UN the maniac chemanyore, mairi vakatsvikinyidzirwa vasungwa vemamiriro ese semhondi, vanobata chibharo kana vanotengesa zvinodhaka, vanoita avo hondo dzavo yenzvimbo uye pakati pemadzinza.
"Uye chii chaunoitira hanya" ndiwo motto waRay Klein, chiremba anovhiya, akapomerwa newaimbova musikana wake chibharo iye asina kuita. Pazuva iro bhuku rinovamba, iye pakupedzisira anozowana iyo zvesununguko rusununguko. Asi zvinotora nguva yakareba uye ichave yakaipisisa yehupenyu hwako riini bope rinotanga uye kupenga kunobata munhu wese.
Nekuti kunyangwe zvikaoma sei kuedza kutevedzera chirevo icho, hauzove neimwe sarudzo kunze kwekutora chikamu kana iwe uchida kupona uye, pamusoro pezvose, kuti avo vaunofarira vanozviita futi. Pakati pavo, Earl (Toad) Coley, waanoshanda naye mukiriniki kwavanotarisira varwere veAIDS kunyanya; Juliette Devlin, chiremba wepfungwa wepanze uye anodanana naKlein, uyo anoshanda navo uye ari kushanya musi iwoyo; Claude / Claudine Toussant, mutengesi akarasika mudambudziko rekuzivikanwa uye chakanyanya kukonzera mhirizhonga; Y Henry abbott, anouraya schizophrenic anozoonekwa ave Klein ane simba kwazvo - uye anonakidza - mubatsiri.
Akaramba ari muchipatara Coley naDevlin vachatarisana neboka revasungwa, inotungamirwa nehutsinye uye hutsinye psychopath. Kunyange, Klein naAbbott vachatofanira kuwana svika kwavari kupinda makona ese, mukoridho uye seweruji kwete chete yemadziro eGreen River, asi zvakare nerima rayo pfungwa nemweya.
MuGreen River, mweya waive kusagadzikana kune njodzi, imba yekutambudza yega inoshanyirwa chete nemasochist kana morons.
Tim Willocks chiremba wezvepfungwa uye munyori, anonyanya kushandisa tratamiento de varwere nematambudziko e kupindwa muropa nezvinodhaka. Saka, mumabhuku ake anongedzera ku mishonga and the martial arts, sezvo iri dema bhandi kutanga dan karate shotokan. Iye zvakare ari screenwriter.
Akanyora zvinyorwa zvitanhatu zvandakaverenga zvina. Pano vangoburitsa maviri, kunyangwe wekutanga akasvikawo, Guta renzara. Asi dzakakurumbira ndeichi uye Kurongeka, yakakurumbira nhoroondo yenhoroondo, ine kuenderera, Vana gumi nevaviri veParis, zvakare yakanaka, asi izvo hazvina kusvika.
Asi pasina kupokana Green River Kukwira o Kuguma kwekusika (zita muchiSpanish rakatorwa kubva pane chakatorwa naKant icho chinotanga) ndicho chinozivikanwa uye chakanyanya kukosha. Zvinoitika muzuva rimwe chete uye yakarongeka mu Zvikamu zviviri:
in the primera inotiratidza mamiriro akapfuura uye inosuma mavara uye mamiriro avo akasiyana mhirizhonga isati yatanga;
uye mu segunda iyo mhirizhonga yose uye mhirizhonga inosunungurwa.
Ikozve kune epilogue uko, nekunyanyisa kuseka uye kuseka, isu tinoudzwa zvinoitika kune vatambi vanokwanisa kutiza - kana kupona - gehena.
Zvinofanira kujekeswa kuti isina kukodzera mweya wakaoma kana wakadzikama, ayo anowanzo kunzi anosemesa uye akasvibira ayo mutauro wakajeka, wakajeka uye une chisimba. Nekudaro, iyo zvakare inodzikisira a kudzika uye runako anenge enhetembo. Kune mitsara, ndima uye, pamusoro pezvose, mifananidzo yakatakurwa kungwara uye a ruzivo rwakakura yemumwe munhu akazvipira kupinda nekuongorora pfungwa dzakaomarara, dzakamonyoroka uye dzakashandurwa nechirwere kana nehunhu hwevanhu pachahwo.
Saka, kutanga kurova: the kurambwa pamberi pemutauro wakasimba usati simba rimwe chete , que the kuyemura izvo zvinogona zvakare kukonzera. Mune yangu chaiyo kesi, yaive kurudziro pakunyora yangu yenoverengeka Marie. Mariri ndaishandisa isina zvivakwa kana uye catharsis. Nekuti iyo ndeimwezve yemhedzisiro yakataurwa naWillocks.
Chinonyanya kukosha kugadzira uye kushandisa chinja chokwadi -Iyo yejeri- senge fananidzo yakakwana yeiyo pfungwa yakadzvanywa zvese nekuda kwezvakaipa zvakakonzerwa uye kune zvakagamuchirwa. Mariri inoratidza gallery ye mavara ayo ari angori iwo akawanda mienzaniso yekuti yako akasiyana kubatana: the hunhu hwepabonde nemakakatanwa ayo, kushandiswa kwepabonde pachako sekubhadhara, kunyadziswa, kurarama kana chipo, iyo chisimba yekuzvarwa kana kuwanikwa, iyo kupenga chinopfuura kana chigadzirwa chechirwere, iyo simba chikuru chese rudo as of odio. Uye iwo mavara anokwanisa kuve akafanana clichéd sezvaari akasiyana zvachose.
Ndiye iye kurova kwepiri uye pamwe chakanyanya kukosha chandinotora pane zvese zvandakaverenga nezvaWillocks: zvake mutsara wakakwana wevanyengeri uye nyaya dzakachena senge cinematographic uye, panguva imwechete, neyavo mitsetse isina kukwana. Iko kugona kwe nzwira tsitsi navo, chero iyo gamba murudo, akashinga uye akagadzirira chero chinhu senge Ray klein, or the kunetseka zvinouraya uye, panguva imwechete, zvakatendeka, zvakavimbika uye nekutenda se Henry abbott, musungwa mukuru akauraya mhuri yake yese nekurova sando uye anopedzisira ave ngirozi inotsiva.
Ivo vaviri vanoumba iyo Vakanaka vaviri mune imwe fananidzo ye bharanzi zvakakwana Pakati pezvakanaka nezvakaipa. Ndokusaka vese vachimanikidza zvakafanana kuremekedza munhu wese, murume akavimbika uye asina simba uye mhuka dzinosemesa. Klein by the kuenzana and the kudyidzanauye Abbott kungoita nekuoma mitezo kutya izvo zvinokonzeresa. Uye zvakadaro ...
"Klein…" Abbott akamuudza. Yaive kekutanga nguva yaakange asati amudaidza kuti "chiremba." Hapana mumwe akandida kupfuura iwe. Klein akada kucheuka, asi iwo maziso aibvira akamumanikidza kuti arambe akamutarisa. Hapana munhu akambova neshamwari iri nani. Iwe wakauya kudivi rangu pandakavhuniwa, iwe ukagara neni. Mandipodza.
Navo, vamwe vakomana mune yavo dzimwe mhando dzisina hunhu Chemhondoro Hector Grauerholz, kana zvimwe zvakadzama munhu Chemhondoro Earl Coley. Nekuti ivo vanoburitsa kupenga kwavo kwepamberi uye kwehutsinye uye hunhu, hunotsigirwa nechero icho chinorambidza, pamwe nerupo rusina udyire uye nekuzvipira kwakanyanya. Ndizvo here kuvharwa mumuviri, nekuti ivo vanokodzera, nekuti ndivo vakaipisisa. Asi chete izvozvo.
Avo vanovachengeta nekuvaranga vakavharirwawo, vatapukirwa nemhepo yakaora yechirwere, huipi uye kusaenzana kwepfungwa. Iyo machinda kunge kaputeni Bill Cletus kana murindi Victor Galindez, muchinjikwa uye kumeso kwemari imwe chete. KANA Juliette Devlin, hunhu hwevakadzi hwakashinga, hwakashinga uye husina kudzivirirwa, uyo anotorwawo uye uyo, nemukana uye zvakare chishuwo chine simba, akabatwa mutirongo.
Willocks anongokukurudzira kuti ufunge nezvazvo uye ozokuratidza Chii chaungaite mugehena rizere nemhuka dzevanhu. Uye isu tese tinoziva kuti idzo dzakaipisisa. Nekudaro, kuti uwane zano shoma, zvakanak kuti uende kunze uye uverenge.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Kuguma Kwekusika, naTim Willocks. Ongorora
Mr. Scrooge. Zvimwe zvezviso zvavo mumamovie